Upapasho lwe-geo-engineering lwe-6 lokukhuphela simahla-iGeofumadas
NgoSeptemba, 2018 Ukulanda, Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo
Namhlanje siya kukubonisa iincwadi kunye neepapasho ukuqonda ukuqhubela phambili kwezobuchwepheshe kwintsimi ye-geo-ingunjineli kunye neziganeko zayo zobomi bemihla ngemihla. Zonke iinketho zikhululekile kwaye zilula ukuyifumana.
Ukujongana nokukhula okuthe nkqo kwetekhnoloji esetyenziswe kwindawo ye-geospatial, kubalulekile ukuba sihlale sihlaziyiwe ukuze igalelo lethu labasebenzi liqhubeke nokuba nexabiso elifanayo okanye ngaphezulu. Ngesi sizathu, sikuphathela iimagazini ezintandathu okanye iincwadana ukuze ukhuphele simahla eziya kukunceda wazi kwaye uqonde iindlela ezintsha okanye uphuculo lobuchwephesha olunokuthi lusebenze kwicandelo osebenza kulo.
Ingumthamo n ° 28 walo mboniso Ukukhuthazwa kwe-intanethi ezayo neNew Coast Media Media. Inika ukubhaliselwa kwamahhala ukuze ufunde kabanzi malunga nezoshishino kunye nezixhobo ezitsha ezisetyenzisiweyo ngaphakathi kwendawo yokuhamba kunye neendawo zokubeka indawo. Njengesiqhelo, faka ulwazi kunye nokuhlaziywa kwi-shishini. Uthetha ngeenkampani ezibalulekileyo, abaphathi abaneempembelelo, iinjineli ezivelele, iinkqubo ezintsha zokusebenza kwedatha eziqala ukuvela kwintsimi, phakathi kwezinye izinto ezininzi; Kwakhona kunokwenzeka ukuba ufumane ukuba zeziphi na iziganeko ezilandelayo kunye nezibano eziza kubakho. Ngokubhekiselele kulolu hlobo kunye nomxholo omtsha uveza, ungafunda malunga neeparadigms ezitsha eziqhutyelwa utshintsho oluqhubekayo kwi-industry positioning industry, "abatsha" abatsha abavela kwindawo kunye nezinto ezintsha eziguqula indawo Le yimeko yezicelo zeemephu ze-smart map (i-MapSmart apps). Le ndlela yokugqibela iyona ngongoma ebalulekileyo kule mqulu 28; ngokubhekiselele kwizixhobo ezitsha ezikhulayo ziqokelela idatha kunye nolwazi ngexesha langempela kwaye vumela umsebenzisi ukuba abe namava okukhawuleza, aluncedo kakhulu, kunye nomnxibelelwano onobungane kunye nangaphezulu kwazo zonke izinto, ngokuchanekileyo ngokusekelwe kwintsebenzo esiyifunayo.
I-5 Izizathu zokufaka iifayile eziphathekayo ze-GPS kunye nezicwangciso zanamhlanje zeselula.
Ngaphandle kokuba ushiye umhlaba we-geolocation, kukho isiluleko sesibini samahhala esinikezwa yi-TerraGo Technologies. Njengoko isihloko sibonisa, lo mbhalo usitshela inzuzo yokuguqula ukusetyenziswa kwezicelo eziqhelekileyo ezisetyenziswe kwizixhobo eziphathekayo ezisetyenziswayo ngaphaya kwe-data elula. Le magazini e-intanethi isinika ithuba lokuqonda iinkalo ezahlukeneyo ukuba ziqwalaselwe xa senza utshintsho kunye neenzuzo ezinokuguqulwa kwezixhobo zeteknoloji zakutshanje. Iingongoma ezibhekiselele ziphakathi kwaye zi: iindleko, isofthiwe, i-hardware, idatha kunye nemveliso. Ikwabandakanya izihloko zomdla kwi-GPS yokufumana.
Ukuba unomdla wokwazi okungakumbi malunga nokuhamba kweendawo, iindlela ezintsha kunye nokwazi i-softwares kunye nee-hardwares zanamhlanje, sincoma ukuba ufunde amanqaku esiwapapashile kwiwebhsayithi yethu, njengokuba «Khuphela iimephu ucwangcise indlela usebenzisa i-BBBike». Ukuba ufuna ukukwazi ukuba ungasebenzisa njani ubu bugcisa kwindawo yomsebenzi, tyelela «ITVT ephezulu yoPhononongo -Saveyi kunye nokusetwa kwesicelo sokwenza»
Oku kusimahla kwaye kulula ukukhuphela i-Ebook kwi-DronDeploy. Ndiyabulela kwi-drone boom eyenzekileyo kwiminyaka embalwa kweli candelo, iinkampani ezininzi zijonga ukubandakanywa kwezi zixhobo ukuphucula umgangatho weenkqubo zazo, iinkqubo kunye neenkonzo. Ngenxa yolwandiso lweli shishini, oorhulumente bamazwe ahlukeneyo kuye kwanyanzeleka ukuba balawule ukusetyenziswa kwale teknoloji.
Ku "Ukulungele ukuthatha imali" ungayiqonda imigaqo emitsha oyakufuneka uyiqwalasele xa usebenzisa i-dronm, ibandakanya ulwazi malunga nokuthengwa kunye nokuthengiswa kwezixhobo kunye nesofthiwe esetyenziswayo. Enye yezinto ezigqwesileyo ngumsebenzi omtsha ovela kulobu buqili bezobuchwepheshe, bezobaqhubi. Le ncwadi ichaza indlela abaqeqeshwe ngayo kwaye baqeshwe; Ukongezelela, ithetha ukuba ingozi ingancitshiswa njani kwaye yintoni na uhlobo lwe-inshurensi eya kuqesha ukwenza umsebenzi we-drone. Ekugqibeleni kodwa kuncinci, gqabaza ngendlela eya kufuneka ukuba yanyamekelwe ngayo kwaye ilungiswe xa ityala.
Umbono ophezulu wendawo yomsebenzi wakho
Ukulandela kunye ne tonic efanayo kubonakala kule ncwadi yeencwadi ngaphandle kweendleko eziveziweyo ziva neDronDeploy. Kule meko ungabona ukusetyenziswa kweedrones kwiinkampani ezahlukeneyo ezinikezelwe ukwakhiwa. Ukusetyenziswa okunikezelwa kwesi sixhobo akukona nje ukulandelela indlela iprojekti ethile ehamba ngayo, kodwa ingasetyenziselwa kwisigaba sokuqala sokwakha ukuphanda umhlaba ukusuka kumbono obanzi ngokubanzi kwaye wenze amamephu . Ikwabonisa nemizekelo yeenkampani ezisebenzisa ukusebenzisa i-drones kunye nendlela abajongene ngayo nokhuseleko olufunekayo kunye nokuphunyezwa kwesoftware ukwenzela ukwandisa ukusebenza kwalobu buchwepheshe. Iqiniso lokuba i-drones ezininzi kunye neyona ndawo ibaluleke kakhulu kwiinkampani, kuya kukhokelela ekufuneni ulwazi oluthe xaxa ukuze isicelo sakhe sisebenziseke ngokusemgangathweni; Kule ncwadi ivelisa umboniso othakazelisayo wezinto eziyimfuneko ukuze ungashiyi nayiphi na inkcukacha ukuba ufuna ukuqala okanye ukugqibezela lo mkhuba.
I-Legrand isebenzisa imiboniso ebonakalayo yemveliso kwi-3D ukukhawuleza ukuthengisa, ukufikelela kwe-106%
Isiphakamiso sesisihlanu yindlela yokwenza i-Kaon Interactive. Inkampani yaseMntla yaseMerika isinika indlela i-3D iteknoloji inokusetyenziswa ngayo ukuthetha kunye nokunyusa ukuthengiswa kwezorhwebo. Kuyathakazelisa indlela yeKaon, ngohlobo lokusebenzisa isofthiwe ye-3D yokuphunyezwa kwezicwangciso ezintsha okanye iiplatifti kwisevisi yabathengi. Bobabini injongo yenkampani kunye nenqaku eliphambili le phephancwadi le-intanethi kukulula ukwenza amava abasebenzisi, ukuqinisa ubudlelwane, ukwakha inyanisekileyo phakathi komthengisi kunye nabathengayo imveliso. Eli phephancwadi libonisa iintlobo ezahlukahlukeneyo zokubonakalisa okubangela ukuba sicinge ngezinye izicelo ezininzi kunemimiselo yendalo kunye nobunjineli apho i-3D sele isele ibeke kakuhle.
Isikhokelo sokuthelekisa isofthiwe yokuqikelela ukwakhiwa
Le ncwadi yakutshanje iza ezandleni zethu kwi-Software Advice. Esi sikhokelo sikhombisa malunga nobunzima xa sikhetha isofthiwe yokulawulwa kweendleko, amakhadi yunithi, uhlahlo lwabiwo-mali, uqikelelo, iintlobo zeemarike kunye nekhonkco yabo kunye neendawo zokwakha.
Ezi zindululo sikulethela zona asizizo nje iinzame zokukuzisa kufutshane nezixhobo zamva nje kunye neziluncedo olwenziwa lutshintsho kwezobuchwephesha kwicandelo lobunjineli beGeo. Ukusetyenziswa kwezinye zezimvo ezichithiweyo kolu papasho lwasimahla, kungazisa izibonelelo nokuba kungokuphuculwa kwento esiyenzayo, kodwa ngokokubonga kwam, ixabiso elongezelelekileyo elinomdla kukuvula ingqondo nokuqonda apho izinto zihamba khona. apho kuya kufuneka ukhuphisane.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Siemens kunye ne-Bentley Systems zomeleza ukusebenzisana kwazo kunye neenkqubo zokutyalomali
Post Next I-Rincón del Vago: Ezi zixhobo ezasisiphumela ngaphandle kwenkathazo kanyeOkulandelayo »